တူရကီနိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထံ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသွားနိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း။ – New Of Burmese
တူရကီနိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထံ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသွားနိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း။
တူရကီအစိုးရသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တပ်မှ‌ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် နေသော ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စစ်အင်အား တိုးချဲ့ခြင်းတို့အတွက် ရေးဆွဲထားသည့် Forces Goal 2030 စီမံကိန်း အောင်မြင်စေရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သမျှအားလုံးကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr Mevlüt Çavuşoğlu ရဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်း အရည်အသွေးမြင့်မားသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် သက်သက်သာထုတ်လုပ်သွားနိုင်မည့် နည်းပညာမျှဝေပေးခြင်းတို့ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
တူရကီကုမ္ပဏီထုတ် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်မှာ အသုံးပြု ဖို့ကို မည်သို့သောအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်စေ ဆွဲဆောင်ချည်နှောင် စည်းရုံးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ တူရကီအစိုးရ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
တူရကီ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီတွေကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်ကို ၎င်းတို့ထုတ် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ပင် ရောင်းချပေးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြု လုပ်နေ ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်အတွက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းအများအပြားကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံထုတ် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေက NATO standard အရည်အသွေးဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းသက်သာမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့အတွက် ရောင်းချပြီး ဆက်လက်ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အစီအမံများကိုပါ ထည့်သွင်းကမ်းလှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
တူရကီနိုင်ငံဟာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်တွေကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ၎င်းတို့ ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာလွှဲပြောင်းရယူဖို့အတွက်ပါ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်က တူရကီနိုင်ငံထုတ် လေယာဉ်၊မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေ၊ တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ၊သံချပ်ကာယာဉ်တွေ၊အမြောက်လက်နက်စနစ်တွေ၊အသေးစားကနေ အလတ်စား စစ်ရေယာဉ်တွေ၊ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာသုံးပစ္စည်းတွေ၊အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေးသုံးစနစ်တွေ၊ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေ၊ခဲယမ်းနဲ့အာရုံခံကိရိယာတွေ စတာတွေကိုဝယ်ယူသွားဖို့ စိတ်ဝင်စားနေ ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်ဟာ ROKETSAN နဲ့ ASELSAN တို့လို တူရကီကာကွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အရေးပါတဲ့ စာချုပ်(၇)ခု ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာ တာ လတ်ပစ် ပဲ့ထိန်းရော့ကတ်/ဒုံးကျည်စနစ်တွေနဲ့ တာလတ်ပစ်မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက် နက်စနစ်တွေပါ ပါဝင်တယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အဆင့်မြင့်သင်တန်းတွေပေးဖို့ တူရကီကိုစေလွှတ်ထားခဲ့ တယ်လို့ www.defseca.com တွင်ရေးသားထားပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr Mevlüt Çavuşoğlu ရဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလည် အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး AK Abdul Momen တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လာရောက်ခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်မှာ အသစ် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ တူရကီသံရုံးကို တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး လမ်းပြ မြေပုံချမှတ်နိုင်ဖို့ လာရောက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့်တူရကီနိုင်ငံတို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကို နှစ်စဉ် အနည်း ဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံထိ နှစ်ဆတိုးမြှင့်သွားရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ကြ မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan ဟာ လာမည့်နှစ်ထဲမှာ Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ရဲ့နှစ်တရာအထိမ်းအမှတ်ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိနေပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မူရင်း ရေးသားသူ ဆရာ သက်ထူးခန့်ပိုင် ရေနံချောင်း အား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
တူရကီအစိုးရသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ စဈတပျမှ‌ အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျရှကျ နသေော ကာကှယျရေးဆိုငျရာ အဆငျ့မွှငျ့တငျခွငျးနှငျ့ စဈအငျအား တိုးခြဲ့ခွငျးတို့အတှကျ ရေးဆှဲထားသညျ့ Forces Goal 2030 စီမံကိနျး အောငျမွငျစရေနျအတှကျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနိုငျသမြှအားလုံးကို ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။
တူရကီနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr Mevlüt Çavuşoğlu ရဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အလညျအပတျခရီးစဉျအတှငျးတှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအတှငျး အရညျအသှေးမွငျ့မားသော စဈလကျနကျပစ်စညျးမြားထုတျလုပျခွငျးနှငျ့ အခြိနျကာလတဈခုအတှငျး ဈေးနှုနျးခြိုသာစှာဖွငျ့ သကျသကျသာထုတျလုပျသှားနိုငျမညျ့ နညျးပညာမြှဝပေေးခွငျးတို့ကို ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။
တူရကီကုမ်ပဏီထုတျ စဈလကျနကျပစ်စညျးတှကေို ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စဈတပျမှာ အသုံးပွု ဖို့ကို မညျသို့သောအခွအေနမြေိုးမှာဖွဈစေ ဆှဲဆောငျခညျြနှောငျ စညျးရုံးသှားမှာ မဟုတျဘူး လို့ တူရကီအစိုးရ အကွီးတနျးအရာရှိတဈဦးက ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
တူရကီ ကာကှယျရေးပစ်စညျးထုတျလုပျသူကုမ်ပဏီတှကေတော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စဈတပျကို ၎င်းငျးတို့ထုတျ စဈလကျနကျပစ်စညျးမြားကို အရဈကစြနဈဖွငျ့ပငျ ရောငျးခပြေးဖို့ကမျးလှမျးမှုတှပွေု လုပျနေ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခကျြဟာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စဈတပျအတှကျ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ စဈလကျနကျ ပစ်စညျးအမြားအပွားကို ပိုငျဆိုငျသှားနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးကောငျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
တူရကီနိုငျငံထုတျ စဈလကျနကျပစ်စညျးတှကေ NATO standard အရညျအသှေးဖွဈပွီး၊ ဈေးနှုနျးသကျသာမှုနှငျ့ယုံကွညျစိတျခရြမှုတို့အတှကျ ရောငျးခပြွီး ဆကျလကျထောကျပံ့ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ အစီအမံမြားကိုပါ ထညျ့သှငျးကမျးလှမျးနခွေငျးဖွဈသညျ။
တူရကီနိုငျငံဟာ စဈလကျနကျပစ်စညျး လိုအပျခကျြတှကေို ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ပွညျတှငျးမှာ ထုတျလုပျနလေကျြရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဟာ ၎င်းငျးတို့ ကာကှယျရေးစကျမှုလုပျငနျးတိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ နညျးပညာလှဲပွောငျးရယူဖို့အတှကျပါ အဆငျပွနေိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စဈတပျက တူရကီနိုငျငံထုတျ လယောဉျ၊မောငျးသူမဲ့လယောဉျတှေ၊ တိုကျခိုကျရေးရဟတျယာဉျတှေ၊လကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစနဈတှေ၊သံခပျြကာယာဉျတှေ၊အမွောကျလကျနကျစနဈတှေ၊အသေးစားကနေ အလတျစား စဈရယောဉျတှေ၊ စဈမွပွေငျ အငျဂငျြနီယာသုံးပစ်စညျးတှေ၊အီလကျထရောနဈစဈဆငျရေးသုံးစနဈတှေ၊ရဒေီယိုဆကျသှယျရေးစကျပစ်စညျးတှေ၊ခဲယမျးနဲ့အာရုံခံကိရိယာတှေ စတာတှကေိုဝယျယူသှားဖို့ စိတျဝငျစားနေ ပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စဈတပျဟာ ROKETSAN နဲ့ ASELSAN တို့လို တူရကီကာကှယျရေး ကုမ်ပဏီတှနေဲ့ အရေးပါတဲ့ စာခြုပျ(၇)ခု ခြုပျဆိုနိုငျခဲ့ပွီးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီအထဲမှာ တာ လတျပဈ ပဲ့ထိနျးရော့ကတျ/ဒုံးကညျြစနဈတှနေဲ့ တာလတျပဈမွပွေငျမှဝဟေငျပဈ ဒုံးလကျ နကျစနဈတှပေါ ပါဝငျတယျလို့ ရေးသားထားပါတယျ။
ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့တပျဖှဲ့ဝငျတှကေို အဆငျ့မွငျ့သငျတနျးတှပေေးဖို့ တူရကီကိုစလှေတျထားခဲ့ တယျလို့ www.defseca.com တှငျရေးသားထားပါတယျ။
တူရကီနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr Mevlüt Çavuşoğlu ရဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အလညျ အပတျခရီးစဉျအတှငျးမှာ ဝနျကွီးခြုပျ Sheikh Hasina နဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး AK Abdul Momen တို့နဲ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုတှပွေုလုပျခဲ့ပါတယျ။
လာရောကျခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉျမှာ အသဈ ဆောကျလုပျထားတဲ့ တူရကီသံရုံးကို တကျရောကျဖှငျ့လှဈပေးဖို့ဖွဈပွီး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံနှငျ့ ကာကှယျရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေးကဏ်ဍတှမှော နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားနိုငျရေး လမျးပွ မွပေုံခမြှတျနိုငျဖို့ လာရောကျခဲ့ခွငျးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နှငျ့တူရကီနိုငျငံတို့ဟာ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှုပမာဏကို နှဈစဉျ အနညျး ဆုံး အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံထိ နှဈဆတိုးမွှငျ့သှားရနျ ရညျရှယျလုပျဆောငျကွ မယျလို့ဆိုပါတယျ။
တူရကီသမ်မတ Recep Tayyip Erdoğan ဟာ လာမညျ့နှဈထဲမှာ Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ရဲ့နှဈတရာအထိမျးအမှတျပှဲကို တကျရောကျဖို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကိုသှားရောကျလညျပတျဖို့ရှိနပေါကွောငျး ရေးသားတငျပွလိုကျရပါတယျ။
မူရငျး ရေးသားသူ ဆရာ သကျထူးခနျ့ပိုငျ ရနေံခြောငျး အား လေးစားစှာ ခရကျဒဈ ပေးပါသညျ။
Previous Article ကိုဗစ်နဲ့ နှစ်သစ်မှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးရဲ့ ရန်ကုန် ကိုဗစ် ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲ
Next Article မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဆက်မလုပ်တော့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာရဲလွင် ပြောပြီ